IU ကိုချစ်ကြောင်း လေးကြိမ်တောင်ဝန်ခံဖူးတဲ့ BTS အဖွဲ့က Jungkook - Myanmarload
IU ကိုချစ်ကြောင်း လေးကြိမ်တောင်ဝန်ခံဖူးတဲ့ BTS အဖွဲ့က Jungkook
လွန်ခဲ့သော ၁၁ လ က 03:08 August 13, 2017
BTS အဖွဲ့ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ ရှိကြတယ်ဟုတ် ?
BTS အဖွဲ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း လာရောက်ဖျော်ဖြေဖူးပါတယ် ။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေကြားသည်းသည်းလှုပ် အားပေးခံရတဲ့ Idol ချောချောလေးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ BTS ရဲ့ အနုပညာစွမ်းပကားကလည်း မသေးလှပါဘူး ။ သူတို့ရဲ့ သီချင်းတွေဟာ Billboard ထိတောင် အောင်မြင်ခဲ့တာပါ ။
ဒီအဖွဲ့ထဲက ပရိတ်သတ်အချစ်တော်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jungkook ကတော့ IU ကို ချစ်တဲ့အကြောင်းကို လေးကြိမ်တိုင်အောင် Media ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ဖူးတာမို့ IU အမာခံ Fan လို့တောင်ပြောရမှာပါပဲ ...
Billboard Music Awards ပွဲမှာ Yahoo Music က BTS ကို အင်တာဗျူးစဉ် အဖွဲ့သားတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံနဲ့ ပထမဆုံးဝယ်ဖူးတဲ့ သီချင်းခွေကို မေးမြန်းခဲ့ရာမှာတော့
Jungkook က တစ်ချက်ခိုးရယ်လိုက်ပြီးမှ " IU ကိုသိသလား " လို့ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကို ပြန်မေးခဲ့ပါတယ် ။
အစီအစဉ်တင်ဆက်သူက သူဝယ်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးအခွေက IU အခွေလားလို့ မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Jungkook ဟာ ရှက်နေတဲ့ ပုံလေးနဲ့ မျက်နှာလေး အောက်ကို ငုံလိုက်ပြီး " ဟုတ်တာပေါ့ " လို့ရယ်ပြီး ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ် ။ အမှန်တော့ Jungkook ဟာ ပွဲဦးထွက်စထဲက IU ကိုအလွန်သဘောကျနှစ်သက်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားဖူးတာပါ ။ ဘယ်မိန်းကလေးအဖွဲ့နဲ့ ရင်းနှီးချင်လဲလို့ မေးခံရတိုင်းမှာလဲ တုန့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲ IU ကိုပဲ သူရွေးချယ်တာပါ ။ သူ သဘောကျတဲ့ မိန်းကလေးပုံစံက IU လိုပုံစံမျိုးပါလို့ ရှက်ဝဲဝဲနဲ့ထုတ်ဖော်ပြောကြားဖူးပါသေးတယ် ။ သူကတော့ IU ရဲ့ အမာခံ Fan တစ်ယောက်ပါပဲနော် ...
သတင်းအရင်းမြစ် : koreaboo
ကိုရီးယားထိ Plastic Surgery သွားလုပ်တော့မယ့် နေခြည်ဦး
ရူတင်နားမှ အေးဆေး အလှတွေပြင်ရတယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်သင်းကြည်
Page generated in 0.0467 seconds with5database query and5memcached query.